Mahad Cawad oo farriin u diray Saciid Deni “Doorasho loo socdaa hala idinka amaan helo” – SDNTV
Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo xalay ka hadlayay Munaasabad lagu soo dhoweynayay Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo loogu sameeyay Muqdisho ayaa sheegay in Xildhibaannada hada jooga ay walaac ka qabaan in aysan soo laabaneyn, sidaas darteed looga baahan yahay Madaxweyne Deni iyo saaxibadiisa in ammaan laga helo.
Khudbad kaftan aheyd oo uu ka jeediyay Munaasabada ayuu sheegay in Kursigiisa uu yaallo Galmudug, una sheego saaxibkiis Qoorqoor inuu ammaan ka helo.
“Doorasho loo socdaa ammaan hala idinka helo, saaxibadaa u sheeg, aniga Kursigeyga wuxuu Transit ku yahay Galmudug, Qoorqoor u sheeg halaga amaan helo, haddii kale heshiiskaas xun waa diideynaa”ayuu yiri Mahad Cawad.
Sidoo kale waxaa uu sheegay saaxibada kale ee laga soo dooranayo Puntland ay amaan ka helaan, maadaama cabsi badan ay qabaan.
Tan iyo markii la shaaciyay heshiiskii Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaasha Dowlad goboleedyada ayaa waxaa soo baxay shaki ah in Xildhibaannada badankood ay saluugsan yihiin, maadaama dib loogu noqonayo maamul goboleedyada, ayna ka cabsi qabaan in dib loo soo dooran waayo, kaddib markii Xildhibaannada badankood ay la safteen Dowladda Federaalka, xilligii uu taagnaa khilaafka Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Previous Kheyre oo la kulmay Qoorqoor muddo 50 cisho kaddib ridistiisa
Next Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ka digey dagaal qabow oo cusub